महरालाई कति वर्षसम्म जेल सजाय होला ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था - samayapost.com
महरालाई कति वर्षसम्म जेल सजाय होला ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
समयपोष्ट २०७६ असोज २० गते ८:२३
महरालाई उहाँले यसअघि सभामुख हुँदा प्रयोग गर्नुभएको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट आइतवार साँझ करीब ६ः३० बजे सादा पोशाकमा गएका प्रहरीले पक्राउ गरी उहाँको निजी सवारीसाधनमा राखेर महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारमा ल्याएका थिए । उक्त वृत्तमा समाचार सङ्कलनमा लागि साँझ पुगेका केही सञ्चारकर्मीलाई ‘सोमबार बिहान आउनु’ फर्काइएको थियो । वृत्त परिसर बाहिर उहाँका कार्यकर्ता वा शुभेच्छुक देखिएका थिएनन् । प्रहरीले महरालाई पक्राउका लागि आजै जिल्ला अदालत, काठमाडौँबाट अनुमति लिएको थियो ।